Ayax teg eelna reeb ( Horaa loo soconayaa) | ToggaHerer
← Musow Morgan iska fogee ina aw Siciid iyo Sacad na iska qabo Ameer Cabdalle
Warsaxaafadeed ka soo baxay odayaasha musdambeedka jaaliyadaha reer Somaliland ee deggen, carriga ingiriiska kuna saabsan ma wasirka arrimaha dibadda mise waa guddoomiye Shirkad ganacsi? →
Waxaan ka mid ahaa dadkii dhashay lixdanaadkii sanadihii ugu danbeeyey, waxaa garaadsaday iyadoo jahhruuriyada Soomaaliya Layna yiraahdo.
Waxaan u arkaa jawaabta su’aashani inay tahay, markii ay qabyaaladii iyo kooxaysigii geyiga Soomaaliland xadhkaha goosteen ee qolo qolo iyo jilib jilib loo kala fadhistay inay door bideen siyaasiyiintii xilligaasi inay bulshooyinka Somaliland ku dhaqan kala badbaadiyaan oo xoriyadii xamar loo raraan. Waxaa xilligaas yaraafday in aaminkii dadweynah dhexdiisa iyo Siyaasiyiintii xiligaas hogaaminaysay asxaabtiii siyaasada
Xoruyada maanta iyo neecowda yar ee aan haysno dadkani waxa uu u soo qashay diinka iyo caanqubta, dhiig badan ayaa u soo daatay. Halyeeyo badan ayaa godka u galay illahay how naxariistee . waay keliya oo u dhinteen waxay ahayd inay dadkoodu raaxada xoriyadda helaan.
Cagba looma dhigine dowladaasi waxay ka socon wayday kooxdii calan casta la odhan jiray oo uu hogaaminayee Axmed Maxmed Maxamuud (Ayax Siilaanyo), Muuse Biixi Cabdi, Maxamed Kaahin Axmed, Dayib Gurey, Cabdilaahi Darawal, Kornayl dhegaweyne iyo kuwa badan oo aan halka lagu soo koobi Karin..
Maanta oo dalkani sadex (3) doorasho madaxweyne la qabtay, Riyaale 2 jeer ayuu qabtay markii koowaad isgaa ku guulaystay , tii labadna diyaarba ma ahayn oo Ayax Siilanyo ayaa ku guulaystay .
tii ugu danbaysay weli xanafteedii iyo herigtii lays mariyey waxay xasuus badan ku yaalatay damiirka dadka . waxaan aad loo xasuusan karaa sidii hanfadanimda ahayd ee komishan ku sheegii dalku wax u maamulay doorashadaas.
Waxaa dadweynuhu galeen diwaan gelin casri ah oo lagu qalay habka loo yaqaan (biometric system) ee akrinta indhaha iyo faraha. Sidii dhacday intiinii codeysay , dhinicii loogu talagalay ba loolama baydhine dadku waxaa magacyadooda laga akhrinayey bug weyn oo la soo mal maluuqay.
Axsaab ku sheegtii xiligaas tartamaysay waxay ogaayeen meesha wax u socdaa, kamaba hadlin. Waayo inan aamuskaa lagu meheriyaa.
Faysal Cali Waraabe oo ah in taariikhda meel xun ka galay qarniga 22aad , isagu dantiisu waxay ahayd in sidan wax u dhacaan. Maalintii dhaweydna ilma yaxaaska ayuu daadinayey ,waa kii lahaa cidbaa la boobay iyo diwlad baa la riday kuwii ridayna Waa Muuse iyo Maxamed Kaahin
Waxaa dhacday ku shubasho cad iyo in xoog lagu muquuniyey xisbigii wadani iyo taageerayaashiiba.
Waxaa uu wax walba ka yeelay cid aan la aamin Karin marnaba inuu aamino qowlaysato iyo qowlaysato isku xidhan, Madaxweynahii hore, Gudoonka baarlamaanka, Komishanka, Aqalka Guurtida. Ma anigaa waalan mise Cadan ayaa laga heesayaa?!
o In ciidamada qaranku noqdaan dhexdhexaad sidii ciidamadii tuuniisiya ee xilligii kacdoonkii carabta, maadaama ay sitaan haybad qaran oo aanay koox iyo qabiiltoona raacin.